igumbi lokushishina labucala - I-Airbnb
igumbi lokushishina labucala
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguMaike
UMaike ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
I-100% yeendwendwe zakutshanje inike uMaike iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
Igumbi londwendwe lelomntu omnye kuphela. Ikhitshi negumbi lokuhlambela zisetyenziswa nangabanye abantu. Ithala lam elincinci liyafumaneka xa liceliwe. Iflethi yam isembindini, kodwa ithe cwaka. Isikhululo setreyini sikumgama wemizuzu eyi-15 xa uhamba ngeenyawo. Indawo yokupaka iyafumaneka phambi kwendlu. Ukungena kunokwenzeka kuphela emva ko-5:30 ebusuku.
Ndihlala kwiflethi encinci etofotofo ekwindawo ephakathi kodwa ethe cwaka kakhulu. Onke amagumbi aqaqambile kakhulu kwaye anobubele. Ndiyithanda kakhulu indawo yam yokuhlala ehlotyeni, apho unokonwabela ilanga emini nasebusuku. Ekuseni, ikhitshi libalele kwaye likumema ukuba ufumane isidlo sakusasa.
Ungahamba ngemizuzu eyi-5. Iibhikawozi, iibhanki, iofisi yeposi, ivenkile enkulu, iivenkile zokutyela ezahlukahlukeneyo, indawo yokutyela i-ice cream kunye nevenkile yokutyela entle yakudala eneekeyiki eziphambili. Kukho neegadi ezimbini ezintle zebhiya. Kwimizuzu emalunga ne-15 ungaya kwi-pizzeria entle (kunye nenkonzo yokuhambisa) kunye nezinye iivenkile zokutyela kwilali. Kubathandi bendalo, iimbaleki nabantu abathanda umoya omtsha: ungayenza i-yoga yakho yasekuseni egadini yam. Kwimizuzu eyi-5 usendle nakwipaseji yokuhamba okanye ukujoga. Ihlathi (Deister) likumgama weekhilomitha eziyi-1.5. Ehlotyeni, ipaki yamanzi yaseWennigsen ikuvumela ukuba uqubhe. Kukho ijimu entle kakhulu kunye ne-sauna scenery kwilali.
Iyakufanelekela ukubona indlu yamathenwa. Kukho iindawo ezintle kakhulu onokuya kuzo eDeister. Isixeko saseHanover sinezinto ezingalindelwanga ngenkcubeko, ukubuka indawo, iikonsathi, imidlalo, imicimbi yamazwe ngamazwe, ukuthenga, iibhari, iivenkile zokutyela kunye nemiboniso yorhwebo - qhagamshelana nje nam.
Umbuki zindwendwe ngu- Maike
Hallo, ich bin Landschaftsplanerin und lebe im schönen Wennigsen. Ich reise selbst gern (Afrika, Europa, Neuseeland) und nutze seit vielen Jahren AirBnB für meine Reisen. Wenn ich nicht reise, dann bin ich gern in der Natur unterwegs.
Ungandibuza nanini na ukuba ufuna uncedo. Ukuba andikho, ndingafikelela kuyo ngefowuni. Ndithetha isiNgesi kakuhle. Ngokuhlwa okanye ngeempelaveki, ndifumaneka ukuba ndithethe kancinci. Ndivela kule ndawo ibe ndingakunika amacebiso amaninzi ngohambo oluya kule ndawo okanye oluya eHanover.
Ungandibuza nanini na ukuba ufuna uncedo. Ukuba andikho, ndingafikelela kuyo ngefowuni. Ndithetha isiNgesi kakuhle. Ngokuhlwa okanye ngeempelaveki, ndifumaneka ukuba ndithethe kanc…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Wennigsen (Deister)